ဉာဏျရညျမွငျ့ပီး ထကျမွတျတဲ့သူမြားဟာ Single မြားဖွဈ
HomeLoveဉာဏျရညျမွငျ့ပီး ထကျမွတျတဲ့သူမြားဟာ Single မြားဖွဈ
ထကျမွကျခွငျးက ဘဝမှာ အောငျမွငျမှုတှရေအောငျ ကူညီပေးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ရဲ့ဖွဈတညျမှုမှာ ထကျမွကျမှူကို အောငျမွငျမှူက ထိနျးခြုပျထားတယျဆိုတာလညျး သငျတှရေ့မှာပါ။ သငျ့တဈဘဝလုံး အမွဲတမျး single ဖွဈခဲ့တယျ ဆိုရငျတော့ ဒီလမျးကို သငျကိုယျတိုငျ ရှေးခယျြခဲ့တာပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ဒီခတျေမှာ သငျ့ပတျဝနျးကငျြကလူတှကေ အခဈြကိုတှသှေ့ားပွီး RS တှေ ခြိတျသှားကွတာ မွငျရမှာပါ။
သငျကိုယျတိုငျ ကွုံနိုငျလောကျတဲ့ အရာတှကေိုတော့ သငျအံ့ဩသှားမှာပါ။ တစုံတဈရာကို သငျစှဲလမျးစပွုလာပွီ ဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ထကျမွကျမှု၊ ဉာဏျကောငျးမှုက တားဆီးတော့မှာပါပဲ။ သငျဟာ ဉာဏျကောငျးသူဆိုတော့ ဘဝမှာ မပတျသကျခငျြတဲ့ အရာတှကေို သသေခြောခြာ သိပါတယျ။
အခဈြနဲ့ပတျသကျပွီး တဈခါလောကျဆိုးဆိုး ရှားရှားခံစားဖူးတာနဲ့ သငျဟာ နောငျတရတတျသူပါ။ ဒီအခကျြကလညျး သငျရညျးစားမထားရခွငျးရဲ့အကွောငျးရငျး တဈစိတျတဈပိုငျးပါပဲ။ သငျ့အခဈြတှကေို ဘယျသူ့ကိုမှ မပေးခငျြတဲ့အတှကျ လုံးဝ perfect ဖွဈမယျ့သူကို သငျစောငျ့နတောပါ။ အဲဒါကွောငျ့ သငျမြှျောလငျ့ထားသလိုလူနဲ့ မဆုံမခငျြး သငျဟာ single ဘဝနဲ့ပဲ နတေော့မှာပါ။
ဉာဏျရညျ အလှနျမွငျ့တဲ့သူတှကေ သူတို့ မပတျသကျခငျြတဲ့သူတှနေဲ့ ပတျသကျရတဲ့အခါ သာမနျလူတှထေကျပိုပွီး စိတျညဈရတယျလို့ British Journal Of Psychology ဂြာနယျမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။ စဈတမျးကောကျယူခကျြတှအေရ ဉာဏျရညျမွငျ့တဲ့သူတှကေ လူတှနေဲ့ဆကျဆံရတဲ့အခါ သိပျအဆငျမပွကွေပါဘူး။
သငျဟာ လူတှနေဲ့ ရောရောထှေးထှေး မနဘေဲ သီးသနျ့နရေတာ ပိုကွိုကျတယျဆိုရငျ ဉာဏျကောငျးတဲ့သူလို့ ယူဆလို့ရပါတယျ။ ဉာဏျကောငျးနတေဲ့အခကျြကွောငျ့လညျး သငျ့ဘဝလကျတှဲဖျောကို ရှာတဲ့အခါ အခကျအခဲတှနေို့ငျပါတယျ။ ဉာဏျကောငျးတဲ့သူ ခပျမြားမြားမှာ single ဖွဈရခွငျးအကွောငျးကတော့ အောကျပါအတိုငျး ဖွဈပါတယျ။
1. သငျဟာ ဘယျလိုလူလဲ၊ ဘာလိုခငျြလဲဆိုတာကို သိတယျ။
သငျဟာ မြှျောလငျ့ခကျြမွငျ့မွငျ့ ထားတတျသူပါ။ သဘောမကတြဲ့သူတှေ၊ သဘောမကတြဲ့ အရာတှကေိုလညျး အားနာတတျသူ မဟုတျပါဘူး။
2. သငျနဲ့ စိတျဓာတျခငျြး ထပျတူကမြယျ့သူကို ရှာဖို့ခကျနတေယျ။
သငျဟာ ဉာဏျအရမျးကောငျးတော့ ပကတိအမွငျနဲ့ အတျောကို သဘောထားကှဲလှဲပါတယျ။ အဲဒီတော့ လူတှကေ သငျ့ကို အထငျလှဲမှာပါ။ ပွီးတော့ သငျနဲ့ စိတျဓာတျခငျြးတူတဲ့သူကို ရှာမတှတေဲ့အခါ single ဖွဈသှားတတျပါတယျ။
3. ဉာဏျကောငျးမှုက သငျ့ကို ဘယျသူနဲ့မှ ခဈြခှငျ့ပေးမှာ မဟုတျဘူး။
သငျဟာဘယျလောကျတောငျ smart ဖွဈသလဲ ဆိုတာကို သငျကိုယျတိုငျ အသိဆုံးပါ။ အဲဒီတော့ ဉာဏျကောငျးတဲ့သငျက ပထဆုံးရညျးစားနဲ့လညျး အဆငျမပွလေောကျဘူးဆိုတာ သိပါတယျ။ အဲဒီတော့ သငျနဲ့သငျ့တျောမယျ့သူကို ရှာရငျးရှာရငျး single ဖွဈသှားရပါတယျ။
4. သငျဟာ ပငျြးလှယျတယျ။
သငျဟာ ဉာဏျကောငျးသူကွီးဆိုတော့ အပငျြးကွီးတာပေါ့နျော။ လနျးလနျးဆနျးဆနျး တကျတကျကွှကွှနနေိုငျမယျ့ နညျးလမျးတှကေိုလညျး သငျ ခဏခဏ ရှာဖှပေါတယျ။ သငျဟာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျတောငျ စိနျချေါတတျသူဆိုတော့ single ဖွဈရခွငျးမှာလညျး ဒီအခကျြက ပါဝငျပါတယျ။
5. သငျ့ရဲ့ထူးခွားတဲ့ အရညျအခငျြးတှနေဲ့ အပွုအမူတှကေို လေးလေးနကျနကျ အသိအမှတျ ပွုပေးမယျ့သူကို လိုခငျြတယျ။
သငျဟာ တခွားသူတှထေကျကို သိသိသာသာ တျောနတောပါ။ ပွီးတော့ အလှနျ့အလှနျထူးခွားတဲ့ အရညျအခငျြးတှကေိုလညျး ပိုငျဆိုငျထားပါသေးတယျ။ သငျထကျမွကျတယျ ဆိုတာကို လကျခံမယျ့သူ၊ စိတျတူကိုယျတူဖွဈမယျ့သူကို လိုခငျြတာပါ။
6. သငျက လူအမြားနဲ့ရငျးနှီးပမေယျ့ သူတို့ကို ဂရုမစိုကျဘူး။
သငျ့ရဲ့ဉာဏျကောငျးမှုတှကေ လူတှကေို ဘယျလိုရငျးနှီးအောငျ ဆကျဆံရမလဲဆိုတာ သိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျက သူတို့ကို ဂရုမစိုကျဘူး။တခွားသူတှနေဲ့ အဆငျပွအေောငျ ဆကျဆံဖို့ကို သငျ့ဘကျက စိတျမပါတာပါ။
7. သငျ့ကို အနိုငျကငျြ့မယျ့သူကို ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတာ သိတယျ။
နောကျဆုံးတဈခုကတော့ တကယျကောငျးပါတယျ။ သငျဟာ smart ဖွဈသူဆိုတော့ တဈယောကျယောကျက သငျ့ကို ကပကျြကခြျောလုပျဖို့ ကွညျ့နတေယျဆိုတာ သိပါတယျ။ အဲဒီတော့ သူက သငျ့ကို ကွိုးမကိုငျခငျ၊ အသုံးမခခြငျ၊ မစျောကားခငျမှာ သငျကိုယျ့သငျ ကာကှယျပွီးသားဖွဈနပေါပွီ။ အဲဒါကွောငျ့ သငျဟာ smart ဖွဈတဲ့ single ဖွဈနရေတာပါ။
ဉာဏ်ရည်မြင့်ပီး ထက်မြတ်တဲ့သူများဟာ Single များဖြစ်
ထက်မြက်ခြင်းက ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုတွေရအောင် ကူညီပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုမှာ ထက်မြက်မှူကို အောင်မြင်မှူက ထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတာလည်း သင်တွေ့ရမှာပါ။ သင့်တစ်ဘဝလုံး အမြဲတမ်း single ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီလမ်းကို သင်ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ခဲ့တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီခေတ်မှာ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေက အချစ်ကိုတွေ့သွားပြီး RS တွေ ချိတ်သွားကြတာ မြင်ရမှာပါ။
သင်ကိုယ်တိုင် ကြုံနိုင်လောက်တဲ့ အရာတွေကိုတော့ သင်အံ့ဩသွားမှာပါ။ တစုံတစ်ရာကို သင်စွဲလမ်းစပြုလာပြီ ဆိုရင် သင့်ရဲ့ထက်မြက်မှု၊ ဉာဏ်ကောင်းမှုက တားဆီးတော့မှာပါပဲ။ သင်ဟာ ဉာဏ်ကောင်းသူဆိုတော့ ဘဝမှာ မပတ်သက်ချင်တဲ့ အရာတွေကို သေသေချာချာ သိပါတယ်။
အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ခါလောက်ဆိုးဆိုး ရွားရွားခံစားဖူးတာနဲ့ သင်ဟာ နောင်တရတတ်သူပါ။ ဒီအချက်ကလည်း သင်ရည်းစားမထားရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲ။ သင့်အချစ်တွေကို ဘယ်သူ့ကိုမှ မပေးချင်တဲ့အတွက် လုံးဝ perfect ဖြစ်မယ့်သူကို သင်စောင့်နေတာပါ။ အဲဒါကြောင့် သင်မျှော်လင့်ထားသလိုလူနဲ့ မဆုံမချင်း သင်ဟာ single ဘဝနဲ့ပဲ နေတော့မှာပါ။
ဉာဏ်ရည် အလွန်မြင့်တဲ့သူတွေက သူတို့ မပတ်သက်ချင်တဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သက်ရတဲ့အခါ သာမန်လူတွေထက်ပိုပြီး စိတ်ညစ်ရတယ်လို့ British Journal Of Psychology ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ စစ်တမ်းကောက်ယူချက်တွေအရ ဉာဏ်ရည်မြင့်တဲ့သူတွေက လူတွေနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါ သိပ်အဆင်မပြေကြပါဘူး။
သင်ဟာ လူတွေနဲ့ ရောရောထွေးထွေး မနေဘဲ သီးသန့်နေရတာ ပိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် ဉာဏ်ကောင်းတဲ့သူလို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။ ဉာဏ်ကောင်းနေတဲ့အချက်ကြောင့်လည်း သင့်ဘဝလက်တွဲဖော်ကို ရှာတဲ့အခါ အခက်အခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဉာဏ်ကောင်းတဲ့သူ ခပ်များများမှာ single ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
1. သင်ဟာ ဘယ်လိုလူလဲ၊ ဘာလိုချင်လဲဆိုတာကို သိတယ်။
သင်ဟာ မျှော်လင့်ချက်မြင့်မြင့် ထားတတ်သူပါ။ သဘောမကျတဲ့သူတွေ၊ သဘောမကျတဲ့ အရာတွေကိုလည်း အားနာတတ်သူ မဟုတ်ပါဘူး။
2. သင်နဲ့ စိတ်ဓာတ်ချင်း ထပ်တူကျမယ့်သူကို ရှာဖို့ခက်နေတယ်။
သင်ဟာ ဉာဏ်အရမ်းကောင်းတော့ ပကတိအမြင်နဲ့ အတော်ကို သဘောထားကွဲလွဲပါတယ်။ အဲဒီတော့ လူတွေက သင့်ကို အထင်လွဲမှာပါ။ ပြီးတော့ သင်နဲ့ စိတ်ဓာတ်ချင်းတူတဲ့သူကို ရှာမတွေ့တဲ့အခါ single ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
3. ဉာဏ်ကောင်းမှုက သင့်ကို ဘယ်သူနဲ့မှ ချစ်ခွင့်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။
သင်ဟာဘယ်လောက်တောင် smart ဖြစ်သလဲ ဆိုတာကို သင်ကိုယ်တိုင် အသိဆုံးပါ။ အဲဒီတော့ ဉာဏ်ကောင်းတဲ့သင်က ပထဆုံးရည်းစားနဲ့လည်း အဆင်မပြေလောက်ဘူးဆိုတာ သိပါတယ်။ အဲဒီတော့ သင်နဲ့သင့်တော်မယ့်သူကို ရှာရင်းရှာရင်း single ဖြစ်သွားရပါတယ်။
4. သင်ဟာ ပျင်းလွယ်တယ်။
သင်ဟာ ဉာဏ်ကောင်းသူကြီးဆိုတော့ အပျင်းကြီးတာပေါ့နော်။ လန်းလန်းဆန်းဆန်း တက်တက်ကြွကြွနေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကိုလည်း သင် ခဏခဏ ရှာဖွေပါတယ်။ သင်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင် စိန်ခေါ်တတ်သူဆိုတော့ single ဖြစ်ရခြင်းမှာလည်း ဒီအချက်က ပါဝင်ပါတယ်။
5. သင့်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ အရည်အချင်းတွေနဲ့ အပြုအမူတွေကို လေးလေးနက်နက် အသိအမှတ် ပြုပေးမယ့်သူကို လိုချင်တယ်။
သင်ဟာ တခြားသူတွေထက်ကို သိသိသာသာ တော်နေတာပါ။ ပြီးတော့ အလွန့်အလွန်ထူးခြားတဲ့ အရည်အချင်းတွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်။ သင်ထက်မြက်တယ် ဆိုတာကို လက်ခံမယ့်သူ၊ စိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်မယ့်သူကို လိုချင်တာပါ။
6. သင်က လူအများနဲ့ရင်းနှီးပေမယ့် သူတို့ကို ဂရုမစိုက်ဘူး။
သင့်ရဲ့ဉာဏ်ကောင်းမှုတွေက လူတွေကို ဘယ်လိုရင်းနှီးအောင် ဆက်ဆံရမလဲဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်က သူတို့ကို ဂရုမစိုက်ဘူး။တခြားသူတွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ဆက်ဆံဖို့ကို သင့်ဘက်က စိတ်မပါတာပါ။
7. သင့်ကို အနိုင်ကျင့်မယ့်သူကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ သိတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ တကယ်ကောင်းပါတယ်။ သင်ဟာ smart ဖြစ်သူဆိုတော့ တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကို ကပျက်ကချော်လုပ်ဖို့ ကြည့်နေတယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူက သင့်ကို ကြိုးမကိုင်ခင်၊ အသုံးမချခင်၊ မစော်ကားခင်မှာ သင်ကိုယ့်သင် ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။ အဲဒါကြောင့် သင်ဟာ smart ဖြစ်တဲ့ single ဖြစ်နေရတာပါ။